Internet Khabar Desk, Author at Internet Khabar - Page 253 of 254
Author: Internet Khabar Desk
सवारी दुर्घटनामा परी एकीकृत राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी घाइते
August 20, 2017 August 20, 2017 Internet Khabar Desk
काठमाडौँ । एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनी दुर्घटनामा परी घाइते भएका छन्। हिजो शनिबार नयाँ बानेश्वरस्थित पार्टी निकट राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघको कार्यालय उद्घाटन गर्न जानेक्रममा उनको सवारी साधनलाई चावहिलमा भाडाको
Internet Khabar Desk
किन फर्फराउँछ आँखा, यस्ता छन् भ्रम र यथार्थ
August 19, 2017 August 6, 2018 Internet Khabar Desk
पुरुषको दाहिने र महिलाको देब्रे आँखा फर्फराउनुलाई शुभ मान्ने विश्वास रहँदै आएको छ । तर, ठीक विपरीत भयो भने अशुभ मानिन्छ । तर, विज्ञानले आँखा फर्फराउनुलाई स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । आँखारोग विशेषज्ञ
August 19, 2017 August 6, 2018
लगातार टाउको दुख्यो ? यस्तो हुन सक्छ समस्या र समाधानका उपाय
August 19, 2017 October 18, 2018 Internet Khabar Desk
वर्षा मौसमसँगै मानिसमा टाउको दुख्ने समस्या पनि बढ्न सक्छ । यसका लागि उपचारमा ख्याल गरिहाल्नुपर्छ । सामान्य समस्या हो भन्दै हामी उपचार गर्न जाँदैनौँ । केही समयमै सन्चो हुन्छ अथवा केही दिनमा ठीक हुन्छ भन्दै
August 19, 2017 October 18, 2018
रुघाखोकीले नाक बन्द भयो, यसरी खुलाउनुहोस् बन्द नाक
August 19, 2017 July 17, 2018 Internet Khabar Desk
यो बर्खामा रुघाखोकी लागेर मान्छेको बिजोक हुन्छ। टिस्यु पेपर लिएर हाँच्छ्यु र ख्वाकख्वाक गर्ने मान्छे तपाईं वरिपरि बग्रेल्ती भेटिन्छन्। यस्तोमा तपाईंलाई पनि रुघा सर्ने सम्भावना भइदिन्छ। रुघा लागेर नाकै बन्द भई मुखबाट सास लिनुपर्ने स्थिति
August 19, 2017 July 17, 2018
यस्तो थियो संसारको पहिलो फोन, फोटोमा हेर्नुहोस्
August 19, 2017 August 20, 2017 Internet Khabar Desk
एजेन्सी। आजको समयमा लगभग ७० प्रतिशत मानिसको हातमा स्मार्टफोन छ । संसारभरी स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको संस्या तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । एक रिपोर्टका अनुसार अहिले नेपालको कूल जनसंख्याभन्दा बढी फोनको संख्या भइसकेको छ । तर अहिले
दर्शकको मन राख्न फेसबुकमा आए निखिल
काठमाडौं । सोसल मिडियामा धेरैजसो मानिसहरु आशक्त भएका छन्। अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालबाट टाढा कमै होलान्। राजनीतिज्ञदेखि कलाकारसम्म फेसबुक, ट्विटर, ईन्स्ट्राग्राममा सक्रिय रहने गर्छन। त्यसमा पनि सेलिब्रेटी अनि स्टारको उपमा पाएका पाएका कलाकारहरु त हर बखत
भोलि यो वर्षकै सबैभन्दा ठूलो सूर्यग्रहण लाग्ने
August 19, 2017 Internet Khabar Desk
काठमाडौँ । चन्द्रग्रहण लागेको दुई हप्तापछि भोलि यस वर्षकै ठूलो सूर्य ग्रहण लाग्ने भएको छ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार, चन्द्र र सूर्य ग्रहण खगोलिय घटना भएपनि यिनीहरुको असर मानिसको जीवनमा पर्ने गर्दछ। तर ग्रहण नदेखिने स्थानमा भने
तपाईको हातमा पनि यस्तो चिह्न छ ? उसो भए तपाई हुनुहुनेछ सबैभन्दा भाग्यमानी
August 19, 2017 October 16, 2018 Internet Khabar Desk
हातका रेखाले पनि हाम्रोबारे धेरै कुरा बोल्छन् । ‘हस्तरेखा शास्त्र’का अनुसार हतकेला, पञ्जा र औंलाले हाम्रो भविश्यबारे धेरै संकेत दिन्छन् । यसले हाम्रो स्वभावको बारेमा पनि धेरै कुरा बताउँछन्, साथै हाम्रो भविश्य कस्तो छ भन्ने
August 19, 2017 October 16, 2018
किन हुँदैछन् धमाधम सेता कुकुर निला ? आश्चर्यमा विज्ञ
एजेन्सी । भारतको मुम्बईमा आजभोली कुकुरको रङ अचानक फेरिएको देखेर सबै जना चकित बनेका छन्। सेतो कुकुरको रङ फेरिएर अचानक निलो बनेपछि सबै जना चकित भएका हुन्। अचानक कुकुरको रङ निलो मात्र हुने हैन्, कयौं
घरमा तुलसीको बोट छ ? रंग हेरेर थाहा पाउनुस् के संकट आउँदै छ
तुलसीलाई हिन्दूधर्म दर्शनले निकै महत्वपूर्ण वनस्पतीको रुपमा लिएको छ । पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरुले समेत तुलसीको प्रयोगले मानिसलाई फाइदा पुर्याउने बताएका छन् । तुलसीले सवैभन्दा धेरै अक्सीजन फाल्ने हुनाले समेत घरमा तुलसी हुनु फाइदाको लागि हुन्छ
← Prev 1 … 252 253 254 Next →